Tantaran'ny orinasa - Union Precision Hardware Co., Ltd.
Momba ny UNION
Union Precision Hardware Co., Ltd. no orinasa miorina ao Taiwan naorina tamin'ny 1980, izay ilay orinasa teo aloha dia "Union Spring Metal Co., Ltd." ary manana foibe any Huizhou any Shina tamin'ny taona 1998. Toy ny fanitarana ny ambaratongam-pamokarana sy ny varotra tsena, nifindra tamin'ny faritra 20000㎡ vaovao ny orinasa tamin'ny 2008, ary nanova ny anarana hoe "Union Precision Hardware Co., Ltd.". Nanangana orinasa hafa koa izahay manerana ny tanibe Shina mba hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa. Taorian'izay dia natsangana ny taona 2010 ny vondrona Union Metal injection injection (MIM), ary nandalo ny ISO 9001: 2008, SO 14001: 2004 ary ISO / TS 16949: 2002 dia holaniana amin'ny 2017.
Ny Lohataona Lohataona. Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana lohataona marim-pototra isan-karazany, lohataona miendrika manokana ary dome elektronika. Ny vokatra dia manasongadina ny famokarana marina sy ny kalitao miavaka, ary azo ampiharina amin'ny indostrian'ny fiarovam-pirenena, indostrian'ny motera, vokatra elektronika hi-tech, ary ny fifandraisana, fitaovana fanaovana teatra an-trano, kilalao, fijanonana ary mpanonta pirinty maro karazana sns. ary mahay manamboatra loharano isan-karazany miaraka amin'ny savaivony tariby eo anelanelan'ny 0.05mm-6.0mm sy ny savaivony ivelany manodidina ny 0. 3mm-80mm. Ny vokatra Union-spring dia vita amin'ny akora tsara kalitao amin'ny alàlan'ny fametrahana milina solosaina sy fitaovana fitiliana miaraka amin'ny rafitra fitantanana solosaina nomerika DCS. Manambatra milina lohataona solosaina zato sy milina Japoney marobe farany, milina lohataona ITAYA, afaka manamboatra loharano tena marina sy ambony indrindra ny orinasa hamaly ny fitakian'ny mpanjifa isan-karazany. MIM Dept. -Mampiasa fitaovana fanta-daza toa ny milina tsindrona ARBURG any Alemana isika, lafaoro fandefasana sinoa Japan Shimadzu. Ireo akora rehetra izay safidinay toa an'i Alemana BASF, American CARPENTER, ary Japan MITSUBISHI. Ireo marika rehetra ireo dia manome fitoniana avo sy fananana ara-batana tsara. Ny fahaizan'ny famokarana dia mety ho rakotra savaivony ivelany 6mm ka hatramin'ny 90mm. Izy io dia fomba fanamboarana tsara indrindra hahatratrarana ampahany saro-takarina sy marimarina ary habetsahana betsaka. Izay mahatafiditra ireto indostrialy manaraka ireto toy ny teknolojia azo ampiasaina, telefaona finday, takelaka, sofina an'ireto karazana vokatra 3C ireto ho an'ny fitaovana, mitondra ireto karazana vokatra ireto.
Ny fiziriziriana amin'ny asany dia nieritreritra ny "fanavaozana, fampandrosoana ary fahafaham-po ny mpanjifa". Ankoatr'izay, mba hahafeno ny fepetra takiana amin'ny fampandrosoana ny tsena manerantany, ny Union Manufacturing Engineering Dept. dia mikaroka hatrany ihany koa amin'ny fandatsahana ny vidiny sy ny fanatsarana ny kalitao, ary ny fanomezana vokatra izay mifanaraka amin'ny fenitry ny Japan Industry Standard (JIS) sy ny American Society for Testing. ary Fitaovana (ASTM), amin'ny firenena indostrialy lehibe takiana amin'ny vokatra mahazatra. Nahazo fahatokisana be avy amin'ny orinasa malaza any Japon, Amerika ary Korea Atsimo ny vokatra. Ny mpanjifan'ny orinasantsika dia misy orinasa malaza eran'izao tontolo izao toy ny Foxconn, Kinpo Electronics, Sint, Amer, Primax Electronics, Epson, Brother, Kyocera, Canon, Lexmark, Sony, RicohNikon, Defond Group sns.
Mampanantena ny sendikà hanokana ny fampandrosoana ny orinasanao ary manantena ny hahatratra ny fampandrosoana iraisana miaraka amin'ny ho avy mamiratra miaraka aminao. Tongasoa eto amin'ny orinasanay.
No.5 Chaoyanger Rd, Shiwan Town, Huizhou City, Provinsi Guangdong, 516127 Sina
Finday: + 86-139-2731-9288
Makà boky maimaim-poana
Fahafahana manao fikarohana